लापरवाहीको पराकाष्ठा : स्वास्थ्य चौकीलाई ‘डेट एक्सपायर’ औषधि ! - The Public Today
लापरवाहीको पराकाष्ठा : स्वास्थ्य चौकीलाई ‘डेट एक्सपायर’ औषधि !
ढल्केवर, चैत ९ गते । स्वास्थ्य नै धन हो । मानव जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो स्वास्थ्य संस्था । चाहे त्यो निजी होस् या सामुदायिक । त्यसलाई निकै संवेदनशील निकायको रुपमा मानिन्छ । त्यहाँ एउटा सानो गल्तीले ठुलो क्षति हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य उपचारमा औषधि अमृत हो । म्याद रहेसम्म औषधि जति अमृत हो म्याद सकिएपछि त्यो औषधि त्यति नै विष । म्याद नाघेको औषधि बेचे कैदसम्मको व्यवस्था छ । औषधि ऐनमा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गरे, म्याद नाघेको औषधि बिक्रीवितरण गरे, औषधिमा मिसावट गरे र मिसावट भएको औषधि बिक्री गरे, कुनै अरू थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरे, लागू र विषालु औषधि सुरक्षित राख्नुपर्नेमा बर्खिलाफ हुने गरी कुनै कामकारबाही गरेसमेत कडा दण्डजरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर जुनसुकै निकायमा नियमन तथा अनुगमन नभए ऐन र कानुनमा जस्तोसुकै कारवाहीको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहदैन ।
यसैक्रममा धनुषाको मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य शाखाको चरम लापरवाही देखिएको छ । नगरपालिकाभित्रका एक स्वास्थ्य चौकीमा म्याद नाघेको औषधीहरु फेला परेको छ । व्यापक जनगुनासो पश्चात आईतवार स्थलगत रिपोटिङ्गका लागि मिथिला नगरपालिका वडा नं ११ चुरेस्थित रहेको तुलसी स्वास्थ्य चौकी पुगेका संचारकर्मीको टोलीले म्याद नाघेको औषधीहरु फेला पारेका हुन् ।
स्वास्थ्य शाखाले पठाएको औषधी
२५ माघ २०७७ मा स्वास्थ्य शाखाले तुलसी स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधीहरु पठाएको थियो । पुसमै म्याद सकिएको कतिपय औषधि स्वास्थ्य शाखाले माघमा पठाएको तथ्य खुलेको छ ।
पुसमै म्याद सकिएको केहि औषधि स्वास्थ्य शाखाले माघमा पठाएको तुलसी स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज सहदेव यादवले बताए । त्यसमा केहि आफ्नो पनि प्राविधिक त्रुटि रहेको ईन्चार्ज यादवले स्वीकारे । ‘मेरो पनि गल्ती छ । औषधि बुझ्ने बेला मलाई चेकजाँच गर्नुपथ्र्यो । तर शाखाकै विश्वासमा त्यसो गरिन’, ईन्चार्ज यादवले भने ‘पछि औषधिको म्याद सकिएको देखेपछि स्वास्थ्य शाखामा जानकारी गराएको छु । तर कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’ म्याद सकिएको औषधिहरुलाई स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको बैठकले व्यवस्थापन गरिने उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज सहदेव यादव
स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मिथिला नगरपालिका वडा नं ११ का वडाअध्यक्ष वेदवहादुर कार्की स्वास्थ्य चौकीमा म्याद सकिएको औषधि रहेको विषयमा भने अनभिज्ञ छन् । गएको साउनमा मात्रै म्याद सकिएको औषधिहरु व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ । ६–७ महिनामै औषधिको म्याद कसरी सकिन्छ भन्दै उनी आश्चर्यचकित भए । पुसमै म्याद सकिएको औषधि माघमा कसरी आइपुग्यो भन्ने द पब्लिक टुडेको जिज्ञासामा वडाध्यक्ष जिल्ल परे । उनी आफू नभएको बेला व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्षलाई स्वास्थ्य शाखाबाट आएको औषधि बुझ्न जिम्मा दिएको भन्दै पन्छिए ।
वडाअध्यक्ष वेदवहादुर कार्की
यता स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर मोक्तानले हामी टेक्नीकल कुरा बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी टेक्नीकलमा परेनौं । म्याद के हो उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो,’ उनले भने ‘म्याद सकेको छ भने हामीलाई भन्नु पथ्र्यो । औषधिमा चैत–बैशाख भनेर लेखेको भए बुझ्थ्यो ।’ तर औषधिमा म्यादहरु अंग्रेजीमा भएको हुनाले आफु बुझ्न नसकेको उनले बताए ।
मिथिला नगरपालिकाका उपमेयर तारा कुमारी बस्नेत लामाले म्याद सकिएको औषधिको विषयले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताईन् । उनले अनुगमन गर्ने आफ्नो अधिकार पनि नगरपालिकाले खोसेको आरोप लगाएकी छिन् । ‘मलाई योजना अनुगमनमा मात्रै सिमित पारेको छ’, उपमेयर बस्नेतले भनिन् ‘जनताको लागि भएपनि स्वास्थ्य चौकीहरुको अनुगमन गर्छु ।’ उनले तत्कालै स्वास्थ्य शाखा अधिकृतलाई फोन गरेर आवश्यक निर्देशन दिदै सचेत गराइन् ।
उपमेयर तारा कुमारी बस्नेत लामा
यस विषयमा मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रचिन्द्र डंगोलले सम्बन्धित शाखासंग बुझेरमात्र केहि प्रतिक्रिया दिने बताए ।
यता मिथिला नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत तालिमका लागि काठमाडौं गएका छन् । उनीसंग प्रतिक्रिया लिन द पब्लिक टुडेले गरेको टेलिफोन संवादमा उनले आफू बाहिर रहेको र कार्यालयमा रहेको तथ्यांक देखेरमात्र केहि प्रतिक्रिया दिने बताए । उनले केहि व्यक्तिले पूरानो रिसीबि साध्न आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेको सुनाए ।
तुलसी स्वास्थ्य चौकी